तपाईको भान्छामा साङ्ला (कक्रोच) छ ? औषधि छर्दा पनि मर्दैनन् ? अब यसो गर्नुस् - Nepal's News Portal
तपाईको भान्छामा साङ्ला (कक्रोच) छ ? औषधि छर्दा पनि मर्दैनन् ? अब यसो गर्नुस्
भान्छामा यताउता दौडिरहेको, भाँडाकुँडा चाटिरहेको, कुनाकाप्चामा भित्र पस्दै–निस्कँदै गरिरहेको कक्रोच (साङ्ला)ले तपाईंलाई दिक्क बनाइरहेको र कीटनाशक औषधि छर्दा पनि असर नपरेको अवस्थामा के गर्नु हुन्छ ? स्पष्ट छ, कीटनाशकले कक्रोचलाई कुनै असर पार्न सकेको छैन । हालै अमेरिकाको इन्डियानास्थित परड्यु युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकले एक अध्ययन गरे । अध्ययनले पत्ता लगायो, कक्रोचमा कीटनाशकसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी बढेको छ । कक्रोचले कीटनाशकसँग बच्ने उपाय निकालेको छ । वर्षौंदेखि हामी केमिकलको मद्दतबाट कीराफट्याङ्ग्रा नियन्त्रण गर्दै आएका छौं ।
कक्रोचलाई भगाउन हामी कुनै केमिकल प्रयोग गर्छौं, त्यसले काम गरेन भने अर्को खोज्नतिर लाग्छौं । थुपै पटक कीटनाशक परिवर्तन गर्दा पनि असर नपर्न सक्छ । अध्ययनकर्ताहरुका अनुसार दुनियाँभरका सहरमा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको जर्मन कक्रोच नियन्त्रण गर्न थुप्रैखाले कीटनाशकले काम गरिरहेको छैन ।
अध्ययनमा सम्मिलित एक वैज्ञानिकले कक्रोचले खाने वस्तुमा कीटनाशक राख्दा पनि असर नपरेको बीबीसीलाई बताए । वैज्ञानिक डी। गोंढलेकर भन्छन्, ‘‘कक्रोचले कीटनाशकसँग लड्ने क्षमता विस्तार गरको विषयमा अध्ययन भएको छैन । सबैभन्दा सोचनीय कुरा त के छ भने, आगामी पिँढीको कक्रोचमाथि बनाइएको कीटनाशक अहिले नै असरहीन भइसकेको छ ।’’ वैज्ञानिकहरुले फरकफरक कीटनाशक प्रयोग गरेर कक्रोच नियन्त्रण गर्न खोज्दा पनि असर नपरेको बताइन्छ ।
कक्रोचको ‘इम्युनिटी पावर’ बढेसँगै यसको सङ्ख्या नियन्त्रण कठिन बनेको छ । यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । गोंढलेकर भन्छन्, ‘‘कक्रोचमा एलर्जी पैदा गर्न सक्ने तत्व हुन्छ । यसले स्वासप्रस्वाससम्बन्धी रोगको खतरा बढाउँछ ।’’
यो कीरा यस्तो ठाउँमा बस्न रुचाउँछ जहाँ खानेकुरा राखिन्छ र भान्छा यसको प्रिय ठाउँ हो । त्यहाँ यसले यस्तो ब्याक्टेरिया छाडिदिन्छ, जसले पेटसम्बन्धी रोग, डायरिया हुन सक्छ ।
कक्रोच विशेषगरी सहरहरुमा हुर्कने कीरा हो । सहरका ठूल्ठूला महल र त्यसका भान्छा, ट्वाइलेटमा यो भेटिन्छ । यसको नियन्त्रणमा जब एक किसिमको कीटनाशकले काम गरेन भने अर्को प्रयोग गर्नुपर्छ । नयाँ र असरदार कीटनाशक बन्नका लागि समय लाग्छ । असरदार औषधि नपाउँदा अपनाउनुस् यी तरिका :
–धूलो, खानेकुराका टुक्रा जम्मा हुने ठाउँलाई पटकपटक सफा गर्ने
–एकैखाले कीटनाशक निरन्तर प्रयोग नगर्ने । एउटा कीटनाशक काम लागेन भने अर्को प्रयोग गर्ने
–कुनाकाप्चा र प्वालहरु टाल्ने, पानी पस्ने ठाउँमा कक्रोच बढीमात्रामा बस्ने गर्छ
–खानेकुरा खुल्ला नराख्ने
–फोहोर जम्ने ठाउँ बेलाबेलामा सफा गर्ने
जमराको जुसले क्यान्सर निको नहुने चिकित्सकको दावी
गर्मीमा किन निस्कन्छ चिल्लोपना? सनस्क्रिन कस्तो लगाउने?
‘ब्लड बैंक’ मा फ्रिजको अभाव
ब्रेन ट्युमरबाट पीडित उर्मिला र गंभीर घाईते घोप्लेलाई युवाहरुले गरे आर्थिक सहयोग
बर्डफ्लु संक्रमण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी नै जान डराउन थाले